Notendren'ny South Pacific Tourism Organization ny sefon'ny China
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Notendren'ny South Pacific Tourism Organization ny sefon'ny China
Ny Organisation South Pacific Tourism Organisation dia nanao sonia MOU fiaraha-miasa amin'ny CBISN Services ary nanambara ny fanendrena ny tale jeneraliny, Andriamatoa Marcus Lee ho Lehiben'ny Solontenan'ny SPTO Shina.
Ny MOU dia vokatry ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny SPTO Pacific Island momba ny fitomboan'ny fahalianana eo amin'ny tsenan'ny dia sy ny fitantanana ny fitomboan'ny fizahantany maharitra any Shina ho any amin'ireo firenena Pacific Island (PICs).
Ny tanjon'ny SPTO any Shina dia ny hampitombo sy hanamafy ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, orinasa ary fampiasam-bola eo amin'ireo firenena 17 mpikambana sy China. Sina dia 18 an'ny SPTOth Mpikambana ao amin'ny governemanta ary mipetraka eo amin'ny Birao ho mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana.
Shina no tsena fizahantany mivoatra haingana indrindra manerantany ary ho an'ny Pasifika dia nitombo be i Sina ary nahatratra 153,119 2015 tonga tamin'ny 88,915 raha 2014 tamin'ny 72.2 (fitomboana 2017%) raha ny taona 143,014, nilatsaka 2015 ireo sinoa tonga tany amin'ny faritra. Ny fahatongavan'ireo sinoa nankany amin'ireo nosy Pasifika dia mihisatra mihisatra ao anatin'ny roa taona lasa izay hatramin'ny tampon'ny XNUMX.
Ny Lehiben'ny Executive SPTO, Chris Cocker dia nilaza fa ny fiantraikan'ny tsena China Travel any ivelany dia tena lehibe tokoa ary namindra haingana ny indostrian'ny fizahantany manerantany. Nanampy izy fa ity fiaraha-miasa eo amin'ny SPTO sy CBISN Services ity dia hiompana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fampiroboroboana sy ny famoronana ny fizahantany ho an'ny fampandrosoana fizahan-tany amin'ny tsenan'i Sina, amin'ny fomba maharitra ary mitondra fitomboana ara-toekarena sy tombontsoa ara-tsosialy ho an'ny faritra.
"Ny fahitako ny SPTO any Shina dia ny famoronana fahatsiarovan-tena, fampitomboana ny fifandraisana, fampiroboroboana ny faritra, famoronana fifandraisana am-pirahalahiana sy fifanakalozana eo amin'ireo firenena 17 mankany amin'ny tsena Travel and Investment any Shina" hoy i Marcus Lee.
Polinezia frantsay dia mankasitraka ny fampiasam-bolan'ny Malagasy amin'ny fizahantany Tahiti
Horohoron-tany 7.1 tany amin'ny faritry ny sisintanin'i Però, Bolivia ary Brezila